Nnwom 22 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Abooboo ne ayeyi nsɛm
“Me Nyankopɔn, adɛn nti na woagyaw me?” (1)
“Wɔbɔ m’ataade so ntonto” (18)
Meyi Onyankopɔn ayɛ wɔ asafo no mu (22, 25)
Asaase nyinaa bɛsom Onyankopɔn (27)
Wɔde ma dwom kyerɛfo; ɔkwan a wɔfa so to no: “Adekyee Wansan.”* Dawid dwom. 22 Me Nyankopɔn, me Nyankopɔn, adɛn nti na woagyaw me?+ Adɛn nti na wummegye me?Adɛn nti na wuntie me sufrɛ?+ 2 Me Nyankopɔn, mefrɛ wo adekyee, nanso wummua me;+Edu anadwo nso a, menka m’ano ntom. 3 Ne nyinaa mu no, woyɛ kronkron,+Na Israel ayeyi atwa wo ho ahyia.* 4 Wo na yɛn agyanom de wɔn ho too wo so;+Wɔde wɔn ho too wo so, na wugyee wɔn.+ 5 Wo na wosu frɛɛ wo, na wugyee wɔn nkwa;Wɔde wɔn ho too wo so, na wɔn nsa ansi fam.*+ 6 Nanso me de, meyɛ osunson, menyɛ onipa.Nkurɔfo dii me ho fɛw,* na aman buu me animtiaa.+ 7 Wɔn a wohu me nyinaa di me ho fɛw;+Wɔtweetwee me wosow wɔn ti+ ka sɛ: 8 “Ɔde ne ho ato Yehowa so. Ma onnye no ɛ! Ma onnye no nkwa, efisɛ ne ho hia no!”+ 9 Wo na wuyii me fii yafunu mu;+Bere a mitua me maame nufu ano no, womaa me koma tɔɔ me yam. 10 Wɔwoo me ara pɛ na wɔde me hyɛɛ wo nsa;*Wone me Nyankopɔn fi me maame yam. 11 Ntwe wo ho mfi me ho, efisɛ ahohia abɛn me,+Na minni ɔboafo foforo biara.+ 12 Anantwinini bebree atwa me ho ahyia;+Basan anantwinini a wɔn ho yɛ den atwa me ho kanko.+ 13 Wɔbaabae wɔn anom kyerɛ me+Te sɛ gyata a ɔrebobom na ɔretetew nam mu.+ 14 Wɔahwie me agu sɛ nsu,Na me nnompe nyinaa ahunhuan. Me koma ayɛ sɛ ɛwokyɛm;+Anan wɔ me mu tɔnn.+ 15 M’ahoɔden asa; mete sɛ ayowa sin,+Me tɛkrɛma afam me dodom;+Woretwe me akɔ owu mu akɔhyɛ dɔte mu.+ 16 Nkraman atwa me ho ahyia;+Wɔaka me ahyem sɛnea nnebɔneyɛfo asafodɔm yɛ.+Wɔrekeka me nsa ne me nan te sɛ gyata.+ 17 Mitumi kan me nnompe nyinaa.+ Wɔtɛɛ wɔn anom hwɛ me hãã. 18 Wɔkyekyɛ me ntaade mu fa,Na wɔbɔ m’ataade so ntonto.+ 19 O Yehowa, wo de, mma me ne wo ntam kwan nnware.+ Wone m’ahoɔden, enti yɛ ntɛm bɛboa me.+ 20 Gye me* fi sekan ano;Me nkwa* a ɛsom bo no, gye fi ɔkraman nsam.+ 21 Gye me fi gyata anom;+Tie me na gye me fi ɛkoɔ* mmɛn mu. 22 Mɛbɔ wo din akyerɛ me nuanom;+Meyi wo ayɛ wɔ asafo no mu.+ 23 Mo a musuro Yehowa nyinaa, munyi no ayɛ! Yakob asefo,* mo nyinaa monhyɛ no anuonyam!+ Israel asefo* nyinaa, mo ho mpopo n’anim. 24 Ɔno na wammu mmɔborɔwa animtiaa, na wammu n’ani angu n’amanehunu so;+Wamfa n’anim anhintaw no.+ Bere a osu frɛɛ no no, otiei.+ 25 Meyi wo ayɛ wɔ asafo kɛse mu;+Metua me bɔhyɛ ade wɔ wɔn a wosuro wo no anim. 26 Ahobrɛasefo bedidi amee;+Wɔn a wɔhwehwɛ Yehowa no beyi no ayɛ.+ Montena ase daa na mo ani nnye.* 27 Asaase ano nyinaa bɛkae, na wɔadan aba Yehowa nkyɛn. Amanaman mmusuakuw nyinaa bɛkotow w’anim.+ 28 Yehowa na ahenni wɔ no;+Ɔno na odi amanaman no so hene. 29 Asaase so asikafo* nyinaa bedidi na wɔakotow;Wɔn a wɔkɔ dɔte mu nyinaa bɛkotow n’anim;Wɔn mu biara rentumi nkora ne nkwa* so. 30 Wɔn asefo* bɛsom no;Wɔbɛka Yehowa ho asɛm akyerɛ awo ntoatoaso a ɛbɛba. 31 Wɔbɛba abɛka ne trenee ho asɛm. Wɔbɛka nea wayɛ akyerɛ nkyirimma.
^ Ebetumi aba sɛ ɛyɛ nnwom nnyigyei anaa sɛnea wɔto dwom no.
^ Anaa “Israel ayeyi ntam (so) na wote.”
^ Anaa “wɔn ani anwu.”
^ Anaa “bɔɔ me ahohora.”
^ Nt., “wɔtow me too wo so.”
^ Nt., “M’ade koro.” Ɛkyerɛ ne kra anaa ne nkwa.
^ Nt., “Mo koma nnya nkwa daa.”
^ Nt., “akɛsefo.”